Tafadzwa Muguti - News Archive - ITWeb Africa
1. Huawei starts building 169 base stations in Zambia
... Tafadzwa Muguti launched a court case in Zimbabwe last year over questions about how Huawei won a $200 million dollar network upgrade deal for state-owned NetOne without going through a public tender process. ...
2. Zimbabwe's NetOne 'may have overtaken Telecel'
... now,” said Kangai. Following the dropping of a court case in which Tafadzwa Muguti, a Zimbabwean businessman now based in South Africa, was contesting a tender award to Huawei, NetOne is now set to get ...
3. Tender court case against Zimbabwe's NetOne withdrawn
Tafadzwa Muguti launched the court case over questions about how Huawei won a network upgrade deal for state-owned NetOne. A South African businessman contesting the awarding of a $200 million ...
4. Huawei-NetOne corruption court case restarts on 19 March
... March to face a corruption case launched by businessman Tafadzwa Muguti. ITWeb Africa has received confirmation from both Chinese telecoms company Huawei and Muguti that the case in Zimbabwe’s administrative ...
5. Tafadzwa Muguti alleges 'sabotage' over NetOne-Huawei court case dismissal
Harare’s administrative court threw out the case after the businessman failed to attend a hearing. Businessman Tafadzwa Muguti has cried foul after a Zimbabwean court threw out his corruption case ...
6. Zimbabwe’s NetOne under fire for poor performance
Mobile operator blames public procurement requirements for lack of competitiveness. State-owned Zimbabwe mobile operator NetOne has blamed public procurement requirements for its lack of competitiveness ...
7. How cars and smartphones ‘inflated’ Huawei’s NetOne Zimbabwe upgrade deal
... the network upgrade deal, which is facing a court case in Harare amid allegations that the over $200 million contract was awarded illegally. Zimbabwean-born Tafadzwa Muguti, who lives in South Africa, ...
8. Tafadzwa Muguti denies he wants NetOne contract for himself
South African-based businessman has taken Huawei to court over a controversial $200 million Zimbabwe cell-tower upgrade. Businessman Tafadzwa Muguti says it’s “unfortunate” that people think he ...
9. SA-based businessman takes Huawei to court in Zimbabwe
Tafadzwa Muguti (pictured) wants answers about how NetOne awarded the Chinese telecoms equipment maker a $200mn network upgrade contract. A Johannesburg-based businessman is taking Zimbabwe mobile ...